Orsa volontany Japoney mirenireny eny an-tanàna lehibe indrindra ao amin’ny nosy Hokkaido · Global Voices teny Malagasy
Nahatonga an'i Hokkaido hitoeran'ny angano mahatsiravina indrindra ireo orsa
Voadika ny 04 Aogositra 2021 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, Español, Português, Français, Nederlands, English
Ny orsa Ussuri, fantatra koa toy ny orsa volontany Ezo, na grizzly mainty, ao amin'ny Valan'ny Orsa Noboribetsu, any Hokkaido, Japana. Tsy mitovy amin'ny zana-karazana orsa grizzly ny orsa volontany Ussuri. Tsy nandray anjara tamin'ny fanafihana tamin'ny 17 Jona 2021 ireo orsa ireo. Saripikan'i brian, avy ao Flickr. Fahazoan-dàlana: CC BY-SA 2.0
Ny zoma 18 jona, orsa volontsôkôlà iray no nihazakazaka nanavatsava ny tanàna iray lehibe indrindra tao amin'ny nosy Hokkaido, nanafika toby miaramila, avy eo seranam-piaramanidina, ary nandratra olona mpandalo efatra alohan'ny nitifiran'ny mpihaza teo an-toerana azy. Mampiseho ny fitomboan'ny fifampikasohana eo amin'ny orsa sy ny olombelona any Japana ny zava-nitranga.
Nivoaka vaovao nasionaly ilay orsa, Ussuri na Ezo volontany satria nisidina namakivaky ny avaratra sy atsinanan'i Sapporo, tanàna misy mponina 2 tapitrisa ao afovoan'ny Hokkaido, azo sary mivantana tamin'ny fahitalavitra sy tamin'ny horonantsary mivantana ny farany avaratra indrindra amin'ny nosy lehibe efatra ao Japana.
(Rehefa mizara ny horonantsary momba ilay orsa nirenireny ao amin'ny YouTube na sehatra hafa, dia nisy fampitam-baovao sasany nampiditra votoaty fampitandremana, satria misy lahatsary sasany mampiseho ilay orsa manafika ireo mpandalo.)
Tena tsy misaina tanteraka ity: orsa masiaka mirenireny any Sapporo, ary misy ny lahatsary hita miditra an-keriny ao amin'ny tobin'ny tafika japoney.
Anisan'ireo olona efatra noratrain'ilay orsa ny mpandeha an-tongotra iray, izay tapaka taolan-tehezana, sy tompon'andraikitra iray ao amin'ny Japan Self-Defense Force (SDF na tafika japoney). Hita tao anaty horonantsary ireo fanafihana olona roa ireo.
Rehefa avy nihazakazaka namakivaky ny tanàna manodidina sy ny toby miaramila, dia nandehandeha teny amin'ny làlamben'ny seranam-piaramanidina kely teo an-toerana ilay orsa alohan'ny nitifiran'ireo mpihaza teo an-toerana azy izay nantsoina hanampy. Vao maraina tamin'io andro io, dia hita teny amin'ny fivarotana lehibe teo an-toerana ilay orsa.
Iray tamin'ireo tranga hafahafa, toy ny mpikomy iray, ninja iray, ary lehilahy iray nitazona antsy, notaterina tao amin'ny nosy Hokkaido tamin'io andro io ihany ity orsa ity.
Androany tao Hokkaido ~
Manomboka amin'ny 3 maraina – Tatitra fa misy orsa iray ao amin'ny fokontanin'i Higashi an-dalam-pivelaram-ponenana (atsinanana), Sapporo.
10AM – Lehilahy iray miboridana tanteraka (saingy misaron-tava) tsikaritra tao amin'ny fokontanin'i Kita (Avaratra).
11AM – Tatitra fa misy lehilahy iray mitondra antsy ao amin'ny fokontanin'i Shiraishi, Sapporo.
ora tsy fantatra – Ninja iray voalaza fa eny an-tampon'ny tranoavo iray.
Ora iray lasa izay, tatitra fa misy fanamoriana fiara mampidi-doza tany Tomakomai (tanàna kely 70km atsimon'i Sapporo)
Manana karazana orsa roa i Japana, orsa mainty Aziatika (Ursus thibetanus), sy ny Orsa Ussuri (volontsôkôlà) (Ursus arctos lasiotus), izay monina ao amin'ny nosy Hokkaido irery ihany, nosy vitsy mponina sy mitoka-monina ary rakotra karazana ala sy tendrombohitra .
Efa ela ny orsa Ussuri no nampiarahana (hevitra) tamin'i H0kkaido ary nahatonga io nosy io ho iray amin'ireo angano eo an-toerana mampatahotra sy mampihoro-koditra indrindra, ary iray amin'ireo mahasintona fizahantany hafahafa indrindra any Japana.
Tsy mbola noraisina ho karazana tandindomin-doza ny orsa Ussuri – tombanana ho 6.500 hatramin'ny 10.000 amin'izy ireo no ao Hokkaido. Mety mahatratra 2.3m ny haavon'ny orsa Ussuri ary milanja 250kg. Mihinana karazan-javatra azo hanina rehetra sy mpanararaotra ny orsa; matetika misy fifandonana eo amin'ny orsa sy ny olona miseho eny akaikin'ny fitoeram-pako sy eny amin'ireo faritry ny biby masiaka lasa fonenan'olombelona.
Voalaza fa nirongatra ny fanafihan'ny orsa tao Japana tato anatin'ny taona vitsivitsy, amin'ny ampahany dia noho ny fiombonan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fihenan'ny olona eny ambanivohitra sy ny faritra. Satria miteraka fiovan'ny tontolo iainana ny fiovan'ny toetrandro, dia mifindra amin'ny faritra vaovao ny orsa mba hitady sakafo. Izany ihany koa no antony mahatonga ny fiarahamonina mihantitra any Japana miteraka ny fihenanan'ny mponina, indrindra ny any ambanivohitra toa an'i Hokkaido, nanjary tsy zatra loatra ny orsa ary tsy dia matahotra sy tsy mankasitraka ny olombelona sy ny fonenan'olombelona.
Tamin'ny mihitsan-dravina 2020, nahatratra av dimy-taona ny fahitana orsa (manafika) manerana an'i Japana, vinavinaina fa nahatonga ny orsa hanitatra ny karazany ny fihenan'ny asan'ny olombelona eny an-kalamanjana noho ny fitohizan'ny areti-mandringana COVID-19. Tamin'ny taona 2019, nanafika olona 157 nanerana an'i Japana ny orsa ary 6285 tamin'ireo biby no voasambotra, avo 10 taona.
Nianatra niara-niaina tamin'ny orsa Ussuri ny mponina Hokkaido sasany. Ao amin'ny Saikinosy Shiretoko, faritra saika feno ala ao morontsiraka avaratra atsinanan'i Hokkaido, nanjary malaza tany Japana ny orsa eo an-toerana noho ny fampahafantarana ny zanak'izy ireo tamin'ireo mpanjono eo an-toerana.
Tamin'ny taona 2017, nandefa andian-tantara mizara roa momba ny fifandraisana akaiky eo amin'ny olombelona sy ny orsa Ussuri ao amin'ny faritra Shiretoko ny fahitalavitra iray ao Sapporo. Etsy ambany ny tapany voalohany amin'izany, ny andiany faharoa kosa azo jerena ao amin'ny YouTube (amin'ny teny Japoney).